Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့လေတပ် တိုက်လေယာဉ်များ
F-7 Fighter Jets
တပ်မတော် (လေ) အက်ဖ်-၇ တိုက်လေယာဉ်များ
မြန်မာ့လေတပ်ရှိ အက်ဖ်-၇ တိုက်လေယာဉ်များသည် တပ်မတော် (လေ)၏ ပင်မကျောရိုးတိုက်လေယာဉ်များ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင်မူ ပိုမိုခေတ်မှီသော ရုရှားနိုင်ငံထုတ် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ တိုက်လေယာဉ်များက အစားထိုးတာဝန်ယူခဲ့နိုင်ပြီဟု သိရပါသည်.... မူလဝယ်ယူထားသည့် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ များထက်ပင် ပိုမိုခေတ်မှီသော ခေတ်မှီအဆင့်မြှင့်စနစ်များ တပ်ဆင်ထားသော (ပစ်မှတ် ၄ခုအား တပြိုင်နက်တည်း ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်နိုင်သော) တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
A-5C Fantan Ground Attack Jets
တပ်မတော် (လေ) ရှိ အေ-၅စီ မြေပြင်ပစ်ကူပေး တိုက်လေယာဉ်များ
အသံထက် ၁.၁၂ဆ ပျံသန်းနိုင်သော အေ-၅စီ တိုက်လေယာဉ်များနေရာတွင် မကြာမှီ မြေပြင်ပစ်ကူပေး တိုက်လေယာဉ်များ အစားထိုးအသုံးပြုမည်ဟု သိရပြီး တရုပ်နိုင်ငံ၏ JH-7 တိုက်လေယာဉ်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
G-4 Super Galeb Trainer Jet
တပ်မတော် (လေ)ရှိ ဂျီ-၄ အမောင်းသင်၊အပေါ့စား တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် တစ်စီးအား မြေပြင်ပစ်ကူပေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တစ်ခုအတွင်းတွင် တွေ့ရစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအမောင်းသင်လေယာဉ်ကိုတော့ အမျိုးအစားမသိဘူးဗျာ အောက်မှာရေးပေးကြပါဦး...
မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ)မှ တိုက်လေယာဉ်များအား တွေ့ရစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့လေကြောင်းပြပွဲဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုတစ်ခုရထားပါတယ်.... ST-68U/36D6 ရေဒါကိုလည်း ပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်.... အတော်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါဘဲဗျို့....။လေတပ်ပုံတွေ နောက်ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ....။
Fulcrum March 12, 2012 at 6:26 PM
အောက်ဆုံးပုံ က PT-6 Piston Engine အမောင်းသင်လေယာဉ်ပျံပါ။
အခြေခံ လေယာဉ်မောင်းသင်တန်းမှာ သုံးပါတယ်။
saiwaihintun March 12, 2012 at 6:34 PM
Hi ko MM, please kindly upload to let all of us see if the video that you get is about our airforce. Hope we allocate buget for some SU30 in the near future.
Fulcrum March 12, 2012 at 11:31 PM
Sorry guys, PT-6 Engine က Radial Engine ပါ။
Yeyanniang March 13, 2012 at 2:38 AM
I hope to see SU-30 with Myanmar Air Force soon.
AgZayYa March 13, 2012 at 5:02 AM
Fulcrum, both of ur comments r right. Engine type of PT-6 aircraft is radial type piston engine.